Di Maria oo sheegay in keliya Messi uu ugu biiri lahaa Barcelona | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Di Maria oo sheegay in keliya Messi uu ugu biiri lahaa Barcelona
Di Maria oo sheegay in keliya Messi uu ugu biiri lahaa Barcelona
Posted by: Mahad Mohamed June 11, 2019
Himilo FM –Xiddiga kooxda Paris Saint-Germain ee Angel Di María ayaa u muuqda mid illaabay waayihii kooxda Real Madrid kuna biiri karo Barcelona, waase hal sabab oo ah si uu ula ciyaaro xiddiga ay qaraabada yihiin ee Lionel Messi.
Di María ayaa ku raaxeytay ollolaha 2018-19 isaga oo dhaliyay 19 gool sidoo kalena caawiyay 17 gool dhammaan tartamada oo uu u ciyaaray kooxda PSG. Xiddiga qaranka Argentine ayaa door qurxoon ka ciyaaray in uu maqnaa Neymar, wuxuuna kooxda ka saaciday in si raaxo leh uu kula guuleysto horyaalka Ligue 1.
Si kastaba, Di Maria ayaa maalmo dahabi ah kusoo qaatay kooxda Real Madrid, xilli ciyaareedkii 2013-14 ayuu Los Blancos ka saaciday inay hantaan koobkii 10-aad ee Champions League kaddib dhammaadka tartanka oo ay la ciyaareen kooxda Atletico Madrid.
Wareysi uu dhawaan bixiyay ayuu wax badan kaga hadlay macquul ahaanshiyaha uu ugu biiri lahaa kooxda Barcelona isaga oo taasi ku xusay keliya Messi.
Previous: Muxuu Cristiano Ronaldo ka yiri xiddiga Matthijs de Ligt
Next: Ciraaq: Carmal lagu mehriyay 8 Milyan oo Doolar
Barcelona oo daawatay geesigii Red Bull Salzburg ee UCL
Varane oo ku qancinaya mid ka mida xiddigaha PSG ku biirida Real Madrid
La kulan- Orodyahankii Soomaaliya u soo hoyay biladda dahabka 2019